चिया निकासीमा वर्षैभरी किचलो, गतवर्ष भन्दा १ अर्ब कम आम्दानी| Corporate Nepal
Saturday, September 19, 2020 | शनिबार ०३ आश्विन, २०७७
चिया निकासीमा वर्षैभरी किचलो, गतवर्ष भन्दा १ अर्ब कम आम्दानी
साउन १२, २०७७ सोमबार १०:३३
वर्षैभरि किचलो चलिरहने चियाको निकासीमा भारी गिरावट आएको पाइएको छ । कहिले भारतले नाका बन्द गर्ने त कहिले आन्दोलन चर्केर चिया प्रशोधनमै समस्या भई चियाको निकासी कम हुँदा यसबाट हुने आम्दानीसमेत घटेको पाइएको छ । चियाबाट गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्दा २०७६/७७ मा रु. एक अर्ब आम्दानी कम भएको छ ।
चिया निकासीको परिमाण बाहिरिने नाका मेची भन्सार काँकडभिट्टाका अनुसार आव २०७५/७६ मा रु दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ६० हजार ५३५ बराबरको चिया नाकाबाट निर्यात भएकामा गत आव २०७६/७७ मा रु एक अर्ब ९४ करोड ७० लाख ५३ हजार एक सय ६० मात्रको निकासी भएको देखिन्छ ।
यस वर्ष कोरोना महामारीका साथै किसान आन्दोलनका कारण चियाको निर्यात सुस्ताएको चिया उद्योगीहरू बताउँछन् । “केही महिना अघिसम्म कोरोनाका कारण पनि चिया गएको थिएन भने निर्यात पनि विराटनगर भन्सारबाट हुँदा कम भएको देखिएको हो”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रबिन राईले भने । उनका अनुसार बन्दाबन्दीका समयमा मात्रै पनि करोडाँैको चिया निर्यात हुन नसकेको हो ।
अहिले पनि उद्योगले उत्पादन गरेको चिया बाहिर पठाउन सकिएको छैन भने किसान आन्दोलनले पनि ठूलो परिमाणमा चिया जान नसकेको महासचिव राईको भनाइ छ । मेची भन्सारमा ठूलो आम्दानी भित्रिने मध्ये चिया दोस्रो स्थानमा पर्ने गरेकामा गएको वर्ष तेस्रो स्थानमा झरेको छ । गएको वर्ष चियालाई अलैँचीले उछिनेको छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने चियाको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा बाहिर जाने गरेको छ तर पछिल्लो समय चियामा आन्तरिक किचलो परेकै कारण निर्यात घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । गएको आर्थिक वर्षको अन्तिममा किसान आन्दोलनको परिणामले पनि आम्दानीमा ह्रास आएको चिया बिक्रेता उदय चापागाईंको भनाइ छ । चापागाईंका अनुसार सरकारले चियालाई आवश्यक पर्ने मल पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु र बन्दाबन्दीकै कारण चिया निर्यात हुन नसकेको हो । रासस
भदौ ६, २०७७ शनिबार
चियाको अवैध निकासीः देख्यानदेख्यै गर्छ प्रशासन, प्रदेश साँसदलाई कसैले गन्दैन्
जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ असोज ११ देखि, कति भर्ने ?
युनाइटेड इदी–मर्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावरको आइपीओ असोज ७ देखि, भर्ने की नभर्ने ?
सिडिएसले सुरु गर्यो मेरो शेयरको मोवाइल एप, लगानीकर्तालाई सुबिधैसुबिधा
माछापुच्छ्रे बैंकले १०.४० प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा, नगद र बोनस शेयर कति ?
कुलमानले भने-मेरो पक्षमा आन्दोलन नगर्नु
संबिधान दिवसमा उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठदेखि शंकर ग्रुपका अध्यक्षले पाए विभुषण, अरु को को ?
जाँदाजाँदै अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेका विवादास्पद निर्णय
सम्झौता गरेको १० बर्षमा आइपुग्यो रेल, जनकपुरबाट बर्दिबासखण्डको लिक बनाउनै बाँकी
माछापुच्छ्रे बैंक र ओम एक्सप्रेस पेमेन्टबीच सम्झौता, भारतबाट पैसा पठाउन सजिलो